Pogba: Waqtigii iigu xumaa waa markii aan joogay Man United.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Juventus Paul Pogba ayaa kajawaabayey su’aalo badan oo laweydiiyey, Sports Mail ayaa wareesatay, wareysiga sidaan ayuu udhacay:
Waayo halyeeygaada ciyaaraha?.
Aad ayaan unasiib badanahay maadaama aan ka garab ciyaaray halyeeygeyga ciyaaraha Pirlo, mmarna ma qarin inaan doonaayo inaan noqdo sidiisa oo kale, wax walbo ayuu kuguuleestay isagoo kaciyaarayo boos muhiim ah.
Haddii aadan ciyaaryahan ahaan laheen maxaad dooran laheed inaa noqotid?.
Marka lafiiriyo da’da aan kubilaabay ciyaaraha marna kama fikirin su’aashaas, waxaan usocdaa inaan ciyaaro koobka adduunka, waxaan kufaraxsanahay inaan weligey kafikirin su’aashaas oo kale.
Waqtiga ugu fiican xirfadaada?.
Waxaan dooran karaa labadii waqti aan kala qaaday labadi horyaal ee Juventus, iyo koobkii ugu horeeyay aan laqaaday France, waa laba waqti oo gooni ah.
Waqtiga ugu xun xirfadaada?.
Waa waqtigeygii Manchester United, dabcan marka aad uciyaareyso koox weyn waa inaad dulqaad uyeelata si aad fursadaada uheshid balse marna madareemin inaan ahay ciyaaryahan laxushmeeyo lana qiimeeyo.
Seddex qof oo caan ah haddi aad casho lawadaagi laheed, kuwe ayey noqon lahaayeen?.
Zinedine Zedane, Jay Z, iyo Usain Bolt.
Maantay oo Sabti ah iyo jaraaid England wixii ay ka qoreen xanta suuqa kala iibsiga ayaan idin heynaa, ugu imoow laacib.net wararkii ugu danbeeyay ee suuqa kala iibsiga anagoo idiin soo gudbineynaa wararkii xanta ahaa ay saaka suuqa kala iibsiga ka qoreen wargeysyada ka soo baxa Ingariiska.
Daily Mail: Tababaraha Arsenla Wenger oo 100M diyaarsaday si uu ugu qarash-gareeyo suuqa kala iibsiga, seddex sano heshiis ayuu usaxiixay Arsenal.
Daily Mirror: QPR oo hogaamineyso kooxaha doonayo daafacii hore ee Manchester City Joleon Lescot 31, kadib markii ay fashilmeen wadahadaladii uu kula jiray West Ham.
Metro: Madaxweynaha Barcelona Josep Maria Bartomeo ayaa uga digay kooxaha Arsenal, iyo Manchester United in ciyaaryahankii hore ee Gunners uu sii joogi doono kooxda Barcelona xilli ciyaareedka danbe.
Daily Express: Kooxda Spanish ka ee Valencia oo kooxaha Mercyside ee Liverpool iyo Everton uga hormari doonto saxiixa dhex-weerarka Chelsea Thorgan Hazard, 21.
Talk Sport: Manchester United oo Liverpool kugaraaci karto saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee qaranka Ukraine iyo kooxda Fc Dnipro Yehven Konoplyanka.
Independent: Xubin katirsan kooxda heesaayaasha ee One Direction Louis Toumilson oo wadahadalo kula jira kooxda Doncaster si uu iibsado.
Daily Star: Milkiilaha kooxda Chelsea Roman Abramovic oo ucodeeyay in heshiis halsano oo dheeri ah lasiiyo Frank Lampard.
Kolo Toure Oo Malariya Laga Dawaynayo Isagoo Seegidoona Kulanka Bosnia-Herzgovina.
Difaaca xulka Ivori Cost iyo kooxda liverpool ayaa laga dawaynayaa malariya wuxuuna seegidoonaa kulan saaxiibtinimo ee xulkiisu layeelandoono Bosnia-Herzgovina.
Kolo Toure oo da’diisu tahay 33 jir ayay hore malaariyadu ugu dhacday sanadkii 2008 wuxuuna markale sabtida ka maqnaan doonaa xulkiisa marka ay ciyaarayaan kulanka saaxiibtinimo ee ay soo dhawayn doonaan Bosnia-Herzgovina.
Inkasta oo ayna arinta Toure halis ahayn sidaana waxaa aaminsan dhakhtarka kooxda Cyrille Dah wuxuuna intaa ku daray inuu dib u soo laaban doono inta ka horaysa furitaanka koobka aduunka.
Dhakhtaraka Cyrille Dah ayaa yidhi : “Illaa Arbacadii ayaa Kolo Tuare la dawaynayay waxayna dhamaanaysaa maalinta jimcaha”
“Waxaanu u sheegnay inuu nasto, kamana qayb galidoono kulanka Bosnia- Herzegovina laakiin wuxuu soo noqondoonaa todobaadka danbe”
Toure ayaa wadankiisa u saftay 107 kulan wuxuuna u dhaliyay 6 gool halka uu 20 kulan u ciyaaray Liverpool xili ciyaareedkan dhamaaday.
Spain Oo Navas iyo Moreno Katagaysa iyo Costa Oo Sabtida Go’aan Laga Gaadhidoono.
Tababaraha xulka Spain Del Bosaque ayaa cadeeyay inuu Jesus Navas iyo Alberto Moreno ka tagaayo isagoo sheegay in arinta Costa sabtida go’aan laga gaadhidoono. Spain ayaa jimcihii laciyaartay Bolivia iyadoo 2:0 kaga badisay. Tababaraha ayaa tiradii 27 ciyaartoy ahayd ku soo yareeyay 24 ciyaartoy isagoo liiska ka saaray Jesus Navas, Ander Iturraspe iyo Alberto Moreno.
Del Bosque ayaa yidhi: “Navas si fiican ayuu u soo kabsaday laakiin wuxuu soo maray 6 todobaad oo bilaa ciyaar ah waxaananu u sheegnay inay aad ugu adag tahay inuu ciyaaraaa”
“Waxaan u sheegay Iturraspe iyo Alberto Moreno inayna hadda noola safrayn Brazil haadii ayna waxkale dhicin.
Diego Costa ayaa wali rajaynaya inuu meel iska dhigo dhaawiciisa wuxuuna tababaruhu sheegay inuu go’aan ka gaadhidoono arinta Costa iyo Juanfran maanta oo sabti ah.
“Waxaa jira Juanfran iyo Costa oo dhibaato yari haysto maalinta sabtida saacadu markay tahay 1:00 PM ayaa go’aan ka gaadhidoonaa. Xaalka Costa wali cirkuu ku laalan yahay, waxaananu war ka sugaynaa kooxdayada caafimaadka.
intaa kadib wuxuu tababaruhu kalsooni fiican siiyay Fernando Torres wuxuuna yidhi: “Waxaan kalsooni wayn u hayaa Torres, taasina waa sababta uu halkan u joogo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay shaqada uu qabanayo”
Rickie Lambert Oo Tijaabada Cafimaad Ka U Mari Doona Liverpool Barito.
Wararka ku aadan saxiixa ay Liverpool kula soo wareegayso weerar yahanka kooxda Southampton Rickie Lambert ayaa isi soo taraya.
Sky Sports ayaa goor dhaw shaacisay in Southampton iyo Liverpool ay ka heshiiyeen saxiixa 32 jir kaan xulka England Rickie Lambert wuxuuna sii raaciyay in laacib kaan uu tijaabada caafimaadka u mari doono Liverpool maalinta barito ah.
Ilaa hada sida la xaqiijiyay Liverpool ayaa kula soo wareegtay laacib kaan 4 milyan oo Ginni oo dib looga dari doono lacago dheeraad ah kuwaas oo ku xiran qaab ciyaareed ka laacib ka iyo sida uu ula qabsado kooxda inkasta oo aysan jirin war rasmi ah oo ka soo baxa labada kooxood.
Sidoo kale Liverpool ayaa wada hadalo ay ku doonayso Adam Lallana iyo Dejan Lovren kula jirta isla kooxda Southampton waxaana la sheegay in Southampton aysan qiimo jaban ku fasixi doonin labadaan laacib.
Luis Enrique Oo Saxiixiisa Koowaad Ka Dhigan Doona Koke.
Tababaraha cusub ee kooxda Barcelona Luis Enrique ayaa si wayn u xiisaynaya laacib ka kooxda Atletico Madrid Koke wuxuuna sheegay inuu yahay bartilmaamdeed kiisa koowaad.
El Mundo ayaa shaaca ka qaaday in Luis Enrique uu sheegay in bartilmaameed kiisa koowaad uu yahay laacibka qadka dhexe ee Atletico Madrid Koke suuqa kala iibsiga ee xaggaagaan.
Luis Enrique ayaa sheegay inuusan doonayn laacib kale oo kaciyaara qadka dhexe kaliya wuxuu sheegay inuu awoodiisa oo dhan uu isugu gayn doono saxiixa 22 jir kaan xulka Spain.
Enrique ayaa isku dayay laacib kaan inuu la soo wareego markii uu tababaraha u ahaa Roma isagoo 19 jir ah, Atletico Madrid ayaan ku fasixi doonin laacib keeda wax ka yar 60 milyan oo euro sida lagu qoray warbixinta.
Van Gaal Oo Dib Ugu Soo Laabtay Doonistii Cesc Fabregas.
Tababaraha cusub ee kooxda Man United Van Gaal ayaa mar kale lala xiriiriyay inuu u dhaqaaqi doono saxiixa laacibka kooxda Barcelona Cesc Fabregas suuqa kala iibsiga ee xaggaaga.
Daily Mail ayaa sheegaysa in Van Gaal uu aad ula dhacsanyahay qaab ciyaareed ka kabtankii hore ee Arsenal Cesc Fabregas wuxuuna isku diyaarinayaa inuu ku dalbado 49 milyan oo euro.
Tababarihii hore ee Man United David Moyes ayaa dhawr dalab ka gudbiyay laacib kan 27 jir ka ah xaggaagii tagay lakiin kooxda Barcelona ayaa dhamaanba soo diiday dalabyadii Man United.
Gool hayaha ree Spain ee kooxda Man United De Gea ayaa shalay sheegay inuu ku qalqaalin doono Fabregas sidii uu ku imaan lahaa Man United isagoo sheegay inuu diyaar u yahay inuu ladago gurigiisa.